राजकुमारी उबोन्रत महिडोन
थाई राजकुमारी उबोलरत्ना: प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा विवाद भएपछि ‘दु:खित’
थाईल्यान्डका राजाकी दिदीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उठ्ने घोषणा गर्दा विवाद सिर्जना भएका कारण आफू दु:खित भएको बताएकी छन्।
निर्वाचन आयोगले सोमवार उनलाई सो निर्वाचनका लागि अयोग्य घोषित गरिदिएपछि राजकुमारी उबोन्रत महिडोनले “आजको दिन र युगमा त्यस्तो समस्या हुनु नहुने” भन्दै दु:ख मनाउ गरेकी हुन्।
उनले निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्दा थाई राजपरिवार सक्रिय राजनीतिभन्दा पर बस्ने परम्परा भङ्ग भएको थियो। राजा वाचिरालङ्कनले आफ्नी दिदीको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णयलाई “अत्यन्त अनुपयुक्त” भनेका थिए।
राजकुमारी उबोन्रतले आफ्नो इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्, “देश र हामी थाईहरूका लागि काम गर्ने मेरो उद्देश्यले समस्या उत्पन्न गरेकोमा म दु:खित भएकी छु जुन (समस्या) यो दिन र युगमा हुनु हुँदैनथ्यो।” यो सन्देशसँगै उनले प्रेषित गरेको बगैँचाको तस्बिरमा ह्याश्‌ट्याग #HowComeItsTheWayItIs पनि छ।
राजपरिवारका सबै सदस्यहरू “राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने र राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने” प्रावधान रहेको भन्दै थाईल्यान्डको निर्वाचन आयोगले राजकुमारी उबोन्रतको नाम निर्वाचनका लागि समावेश नगरिने जनाएको थियो।
निर्वाचन आयोगको भनाइ राजदरबारको विज्ञप्तिपछि आएको थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “राजपरिवारकी एक वरिष्ठ सदस्य राजनीतिमा सहभागी हुनु…. अत्यन्त अनुपयुक्त मानिन्छ।”
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा राजकुमारी उबोन्रतले शुक्रवार गर्दा थाई राजनीति पूरै तरङ्गित भएको थियो। उनी थाईल्यान्डका विवादित भूतपूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावातको दलबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन भएकी थिइन्।
अहिले निर्वाचन आयोगले सो दल थाई रक्सा चाट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेबारे विचार गरिरहेको छ। सो दलका नेताले राम्रो उद्देश्यले राजकुमारीलाई निर्वाचनमा उठाइएको बताउँदै भनेका छन्, “हामीभन्दा माथि राजा र राजसंस्था छन्। अनुसन्धानका लागि हामी तयार छौँ।”
सन् २०१४ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रायुथ जन-ओचाले सैनिक विद्रोहबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि ‍आगामी मार्च महिनामा पहिलो पटक निर्वाचन हुन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री प्रयुथ जन-ओचा पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार छन्। राजकुमारीलाई अघि सारेर विपक्षीले सेनालाई सत्ताबाट हटाउने योजना बुनेको आकलन यसअघि गरिएको थियो।
को हुन् राजकुमारी उबोन्रत ?
राजकुमारी उबोन्रत सन् १९५१ मा स्वर्गीय राजा पुमिपोन अदुन्यदेतको पहिलो सन्तानको रूपमा जन्मिएकी थिइन्।
उनले म्यासचुसिट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा अध्ययन गरिन्। सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गर्न राजपरिवार त्यागेकी थिइन्।
पतिसँग पारपाचुके गरेपछि उनी सन् २००१ मा थाईल्यान्ड फर्किएर राजपरिवारका कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेकी थिइन्।
उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छिन् र केही थाई चलचित्रहरूमा पनि देखिएकी छिन्। उनको तीन सन्तानमध्ये एक जनाको सन् २००४ को सुनामीमा मृत्यु भएको थियो। बीबीसी